Tartiib tartiib gadhka | Ragga Stylish
Shirkadda qurxinta Clinique soo saaray khadad alaab ah oo si gaar ah loogu talagalay maqaarka labka. Tani waxay u tarjumaysaa isku qurxin ujeedadeedu tahay inay daboosho baahiyaha mudanayaal, iyadoo maanka lagu hayo in waxyaabaha ugu waawayn ee la isku qurxiyo ay tahay "gadhka", Clinique bilaabay Xiirashada kiiska. Waa nidaam ka kooban adeegsiga seddex shey oo nooc ah.
Isku-dhafkaani wuxuu leeyahay wajiga xoqida (100ml). Badeecadani waxay soo saareysaa unugyada dhintay waxayna tima jareysaa timaha, iyadoo u diyaarineysa inay maalin kasta xiirto. M-Shave Aloe Gel (125ml) wuxuu jilciyaa gadhka wuxuuna u ogolaadaa inay daabku si fiican u rogmadaan inta ay xiirayaan. Dhinaceeda, Foormulaha Xakamaynta Gadhka Dheer ee Xiiraha (35ml) ayaa dejiya maqaarka oo gaabiya koritaanka gadhka.
El Xiirashada kiiska de Clinique Waa ikhtiyaar aad u wanaagsan raggaas ay tahay inay maalin kasta xiiraan oo muuqaalka maqaarkoodu uu yahay mid laga walaaco.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Koritaanka gadhka oo gaabis ah
Waxaan rabaa in aan ogaado meesha aan ka gadan karo sheyga gadhka, mahadsanid
Jose Antonio Alba muuqaalka booska dijo
Tani waa waxashnimo! Waxaan u maleynayaa inaan isla markiiba iibsan doono, maxaan idhaahdaa hada waan ordayaa oo balakoonka waan ka boodayaa.
Jawaab Jose Antonio Alba
Sideen ku iibsan karaa?
Gudaha Liverpool ee Mexico way iibiyaan
Ururinta daawashada Emporio Armani